Shirkad ganacsi ku samaynta Finland - InfoFinland
Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Shirkad ganacsi ku samaynta Finland
Shirkad waad ka samaysan kartaa Finland kumana xirna jinsiyaddaada. Muhiimaddu waa in aad heysato xaqa joogitaanka Finland, aqoonta xirfadeed ee loo baahan yahay iyo aqoon afka Finnishka ah oo kugu filan.
Horumari fikrad ganacsi
Samee qorshaha waxqabadka ganacsiga
Talow weydii talo-bixinta ganacsiga
Dooro nooc shirkadeed
Habsami-socodka aasaasidda shirkaddu wuxuu la mid yahay kan muwaadin Finnish ah.
Haddii aad dooneyso in aad shirkad samaysato, si fiican uga fikir in aad heysato fikrad ganacsi oo wanaagsan. Waa muhiim in aad si aad u fiican taqaan laanta aad ka shaqeynayso iyo sharciga quseeya. Waxaa kale muhiim ah aqoonta macaamiishaada iyo hababka iibka.
Xusuusnow, in ganacsigu uu halistiisa leeyahay. Maalgelin ku filan iyo qorshe laga taxadiray ayaa ah waxa aan laga maarmin.
Samaynta shirkad cusubFinnish | Iswidish | Ingiriis
Qorshaha ganacsiga waxaad uga fikireysaa awooddaa aqooneed iyo waxyaabaha aad ku liidato iyo waxyaabaha uu leeyahay waxa aad iibineyso, alaabta ama adeegga. Ka fikir dadka macaamiishaada ah iyo rajooyinka ay qabaan. Ka fikir sidoo kale dadka suuqa kugula tartamaya nooca ay yihiin iyo nooca waxyaabaha ay iibinayaan iyo hababkooda waxqabadka.
Qeybta ugu muhiimsan qorshaha ganacsigu waa qorshaha waxqabadka shirkadaada. Si fiican uga fikir sida ay shirkaddaadu u shaqeynayso iyo meelaha ay shirkaddaadu ku shaqeynayso nooca ay yihiin. ka fikir, qalabka wax soo saarka iyo shaqaalaha aad u baahan tahay. Iyo qalabka xayeesiinta ee aad u isticmaaleyso horumarinta iibintaada. Soo ogow sidoo kale in ceymisku uu daboolayo halista waxqabadka.
Ka fikir sidoo kale sida aad qaban-qaabineyso xisaabaynta una qorsheynayso dhaqaalaha. Sidee ayaad dooneysaa inaad ula socoto, sidee ayeey qorshahaadu u hirgelayaan? Arrimahan oo dhan ku qor qorshahaada waxqabadka ganacsiga.
Caawimaadda sameynta qorshaha ganacsiga
Talooyin rasmi ah waxaad dejinta qorshaha waxqabadka ganacsiga uga heleysaa xarumaha talobixinta ganacsi. Waxaad sidoo kale bogaggooda ka rogan kartaa hagitaannada ganacsadaha oo ku qoran Finnish iyo Ingiriis. Waxaad halkaas sidoo kale helesaa saballo ama tusaalooyinka qorshaha waxqabadka ganacsiga iyo samballada dukumentiyo kale.
Talo weydii talobixinta ganacsiga
Finland, qofkasta wuxuu xaq u leeyahay in uu helo talobixin ganacsi oo lacag la’aan ah. Talobixinta waxaa bixiya tusaale ahaan:
Xarumaha shirkadaha cusub
Xarunta deegaanka, gaadiidka iyo shaqooyinka (Xarumaha ELY)
Xafiiska shaqada iyo dhaqaalaha (Xafiisyada TE)
Ganacsi Finland ( Bogagga internetka iyo telefoonka)
Marka aad hesho aragti ganacsi oo wanaagsan, la xiriir xarunta adeegga shirkadaha ee kuugu dhow. Khubrada halkaas joogta ayaa kaa caawinaya horumarinta fikradda ganacsiga, baaritaanka suuqa, xisaabinta faa’iido lahaanshaha iyo sahminta maalgelinta. Kaalmo ayaad sidoo kale ka heleysaa marka aad ka fikireyso sameysashada shirkad.
Talobixinta ganacsiga waxaad ku heleysaa afka Finnishka iyo Iswidhishka magaalooyinka waaweynna waxaad ku heleysaa af Ingiis. Mararka qaad waxaa suurtagal ah in xittaa talobixinta lagu helo luqado kale.
la-talinta shirkaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Dhinacyo kala gedisan ayaa qabanqaabiya koorasyada ganacsadaha iyo madal-wareedyo, kuwaas oo uu faa’iidooyin badan ka helayo qofka shirkad samaysanaya. Waxyaabaha koorasyada looga baaraandegayo waa tusaale ahaan sameynta qorshaha waxqabadka ganacsiga, billaabista shaqada shirkadda, xisaabhaynta, canshuurta shirkadda, arrimaha sharciga, suuqgeynta, adeegga iibinta iyo macaamiisha.
Intaadan shirkadda aasaasin ka hor si taxader leh uga fikir maalgelinta shirkadda. Waa muhiim in aad billowga hore heysato raasal-maal kugu filan. Maalgelinta shirkaddu waxay qeyb ahaan noqon kartaa lacag hadiyad ama deyn ah. Marka aad deynta codsaneyso waa in aad heysataa qorshaha waxqabada ganacsiga oo wanaagsan.
Bangiyada iyo Finnvera ayaa ganacsatada shirkado sameysanaya deyn siiya. Finnvera waa shirkad maalgelineed oo ay dowladda Finland leedahay. Waxay deyn siisaa shirkadaha cusub iyo shirkadaha shaqeynaya. Haddii ay shirkadaadu heysato waxqabadka faa’iido leh, laakiin aadan heysan lacag badan ama ceymis aad bangiga deyn uga qaadan karto, weydii Finnvera in deyn ama damiinta deynta ka helo iyo in kale.
Maalgelinta shirkaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Lacagta billaabista (Starttiraha)
Markii aad ganacsi bilowdid waxaa lagu siin karaa lacagta bilowga gancsiga (starttiraha) si aad u heshid lacagta baadbaada nolosha inta hawlaha ganacsigu ay bilowga yihiin.
Ka codso lacagta billaabista xafiiska shaqada ee aad macaamiisha ka tahay. Lacagtaas waxaad heli kartaa ugu badnaan 18 bilood.
Markii aad dalbanaysid lacagta bilowga, Xafiiska shaqada iyo xoogsashadu wuxuu baarayaa, in ganacsigu uu yahay doorasho adiga kugu habboon.
Waad heli kartaa lacagta billowga, haddii
aad tahay shaqo laawe shaqo raadis ah
aadan aheyn shaqo laawe, balse aad gebi ahaanba isu beddeleysid ganacsade tusaale ahaan adigoo joojinaya shaqada mushaariga ah, ardaynimada ama shaqada guriga
uu ganasigu kuu yahay shaqo labaad aadna dooneyso inaad waxqabadka ganacsiga ka dhigto mid shaqa koowaad
Shuruudaha lacagta bilowga ganacsigu tusaale ahaan waa:
ku ekaanshada ganacsadenimada
lahaanshada aqoon ganacsi oo ku filan, lahaanshada xirfad iyo imkaaniyaadka looga baahan yahay hawlaha ganacsiga aad qorsheyneysid.
Xafiiska shaqada iyo xoogsashada ayaa qiimeynaya, in hawlaha ganacsigu ay noqon karaan kuwo faa’iido leh
inay cagta bilowga ganacsigu tahay mid daruuri ah marka laga eego xagga dakhliga nolosha ee qofka ganacsiga bilaabaya
in hawsha ganacsiga la bilaabayo kadib, marka la ogolaado lacagta kaalmada
Haddii aad ku fekereyso inaad codsato lacagta billaabista, la xiriir wakhti hore Xafiiska shaqada iyo dhaqaalaha.
Sidoo kale waxaa jira kaalmooyin ka duwan oo loogu talogalay in la siiyo ganacsadaha bilowga ah. Ganacsi-Finland (Yritys-Suomi) ayaa ku siinaya wixii macluumaad ah oo la xiriira wadiiqooyinka kala duwan ee maalgelinta.
Macluumaad la xiriira lacagta taakuleynta bilaabida ganacsigaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Marka aad aasaasaysid shirkad, waa inaad doorataa nooca shirkada iyo magaca shirkadda waana inaad caddaysaa qaybta ganacsiga aad bilaabaysid. Marka aad dooraneyso nooca shirkadda, xisaabta ku daro waxyaabaha ay kamidka yihiin cadadda dadka shirkadda samaynaya, baahida raasal-maalka, qaybsiga mas’uuliyadda iyo awoodda go’aan gaarida, maalgelinta iyo canshuurta.
Noocyada shirkadaha ganacsiga ee Finland waa, Magac ku shaqaysasho, Shirkad furan, Shirkad maalgelinteedu dad ka dhaxayso laakiin masuuliyadu ay hal qof saaran tahay, Shirkad saamiley ah iyo Iskaashato.
Markii aad ka fakaraysid doorashda nooca shirkadda aad samaynaysid, waxaa lagama maarmaan ah inaad la xiriirtid Talo-siinta ganacsiga.
Faahfaahin dheeraad ka sii aqri bogga InfoFinland Noocyada shirkadaha.